သင်ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ယူရမယ့် အကောင်းမြင်တတ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ အလေ့အထ (၇)ခု - Lifestyle Myanmar
အကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က ကြင်နာတတ်ပြီး အကြံဉာဏ်တွေ အမြဲပေးပြီး ကူညီပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေချင်ရင်၊ လောကကြီးနှင့် လူတို့အပေါ် ထားရှိသော သင့်သဘောထားကို ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ဘဝနဲ့ လောကအမြင်ကို လုံးဝ ပြောင်းလဲစေမယ့် အလေ့အကျင့်သစ်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုပါတယ်။ အဆိုးမြင်အတွေးတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါတိုင်း ‘No’လို့ပြောဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကို ခွင့်မပြုပါနဲ့။ သင့်ကို ကြောက်စိတ်လွန်သူအဖြစ် လမ်းပြပြီး သင့်ဘဝကို အဆိုးမြင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်စေနိုင်ပါတယ်။
သင်နေမကောင်းပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေထိုင်မကောင်းဘူး။ ရောဂါက ကုသလို့မရဘူးလို့ ရောဂါလက္ခဏာအမှားတွေ ကိုယ့်ဘာသာမဖော်ထုတ်ပါနဲ့။ အဲဒီအစား မကြာခင်အဆင်ပြေလိမ့်လို့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒါက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ခွဲခြားသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေတိုင်းမှာ ဒီ method ကိုပြောင်းလဲလျှင် သင့်ဘဝဟာ ပိုမိုလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုးမြင်အတွေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သင်ယူပြီးနောက်မှာ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက် အလေ့အထတစ်ချို့ စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။
၁။ မလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့ပါ
အကောင်းမြင်သူတွေဟာ အတိတ်ကာလက သူတို့ရဲ့ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို ချန်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကို ဒဏ်ပေးခြင်း၊ နောင်တရခြင်းက သင့်ဘဝကို ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ဘဝကို ရှေ့ဆက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ အပေါင်းအသင်းမင်ခြင်းက ကောင်းပါတယ်
အကောင်းမြင်တတ်သူတွေဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး အသိအကျွမ်းအသစ်တွေနဲ့ ခင်မင်လိုကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေက ပွင့်လင်းခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို မစောင့်ပါနဲ့! ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ
သင်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စတင်ပါ။ သင့်ဆီအလည်လာမယ့် အောင်မြင်မှုအတွက် ထိုင်မစောင့်ပါနဲ့။ သင့်ဘဝပိုကောင်းစေဖို့ ယခုပဲလုပ်ဆောင်ပါ။
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှုံ့ဆော်ပါ
လှုံ့ဆော်မှုက အောင်မြင်မှုအတွက် သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို သင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆင်ခြေတွေ ရှာမယ့်အစား သင့်ရဲ့အလားအလာအားလုံးကို အသုံးချပြီး သင့်ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ပါ။
၅။ ပိုပြီး ပြုံးပါ
အပြုံးက အံ့ဖွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်! တကယ်လို့ သင့်မှာ ကျရှုံးမှုရှိခဲ့ရင် အကောင်းဘက်ကတွေးလိုက်ပါ။ ဟာသနှင့် အမြီးအမြောက်မတည့်တဲ့စကားတွေကတောင် သင့်ကိုပိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။
၆။ သင့်ကြောက်စိတ်ကို တိုက်ခိုက်ပါ
သင့်ကြောက်စိတ်တွေက သင့်ဘဝကို ပျင်းစရောကောင်းပြီး ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်စိုးရိမ်မှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး သင့်အိပ်မက်တွေဆီ ရောက်အောင်သွားပါ။
ဘဝက အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး အတူညီသော ဘဝအခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ သင့်မှာ အားရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ကျရှုံးမှုအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ဘယ်အခြေအနေမဆို ထိန်းချုပ်ဖို့နှင့် သင့်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားပါ။
တခါတရံ သင်ကိုယ့်သင်၊ သင့်အပြုအမှုနှင့် အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက သင့်အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်ရှိအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ သတင်းအချက်အလက် ရည်ရွယ်ချက် အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။